महामारीसम्बन्धी तीन शंकाबारे अमेरिकाले विश्वलाई जवाफ दिनुपर्छ – Online Annapurna
१० चैत्र २०७६, सोमबार ०५:०५ March 23, 2020 93 Views
अनआइनअन्नपूर्ण/पोखरा, चैत्र १०
पहिलो, अमेरिकी रोगको नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र अर्थात् सीडीसीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, सन् २०१९ सेप्टेम्बरदेखि सुरू भएको अमेरिकी फ्लूबाट करिब तीन करोड अमेरिकी सर्वसाधारण संक्रमित हुनुका साथै २० हजार भन्दा बढीको मृत्यु भयो। वास्तवमा फ्लूबाट मृतकहरूमध्ये केहीलाई कोभिड-१९ संक्रमण भएको सीडीसीका प्रमुख रोबर्ट रेडफिल्डले सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्नुभयो। त्यसैगरी फ्लूबाट २० हजार जना मृतकहरूमध्ये कति जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए? अमेरिकाले फ्लूद्वारा कोभिड-१९ को ढाकछोप गरेको छ कि छैन?
दोस्रो शंका भनेको सन् २०१९ जुलाईमा अमेरिकाले किन अकस्मात रूपमा मेरील्याण्ड राज्यस्थित डेट्रिक रासायनिक तथा जैविक हतियार आधार बन्द गरेको थियो? उक्त आधार अमेरिकी सेनाको सबैभन्दा ठूलो रासायनिक र जैविक हतियारको अनुसन्धान केन्द्र हो। यो केन्द्र बन्द भएपछि अमेरिकामा धेरै निमोनिया वा निमोनियाजस्तै बिरामी भेटिएका छन्। हाल केही मान्छेले ह्वाइट हाउसको बेवसाइटमा अमेरिका सरकारसँग उक्त आधार बन्द गर्ने वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाले स्वदेशका सर्वसाधारणको जीवन तथा स्वास्थ्यको विचार गरेमा उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
तेस्रो, फेब्रुअरी अमेरिकी सरकारले कोभिड-१९ महामारीलाई महत्व नदिनुका साथै किन केही सांसदले आफ्नो हातमा रहेका लाखौं डलर शेयर बेचेका थिए? यी राजनीतिज्ञहरूले एकातिर भित्री ट्रेडिंग गर्दा स्टक बिक्री गर्नुका साथै अर्कातिर महामारी पनि ढाकछोप गरेका छन्, हो कि?
समय र जीवन मानवजातिले उद्धार गर्न सक्दैन। यस विषयबारे अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ।श्रोत :सिआरआई डट सिएन